If govt is posting surpluses, why are Zimbos in this mess? - NewsDay Zimbabwe
HomeEditorial CommentIf govt is posting surpluses, why are Zimbos in this mess?
THIS week, Finance Minister Mthuli Ncube was struggling to convince millions of poverty-stricken Zimbabweans that the country has been posting healthy budget surpluses, and that their problems were being solved through this “strong fiscal performance”.
Perhaps the minister could help Zimbabweans understand why in spite of the hyped surpluses, 500 000 of this country’s citizens have continued to risk their lives in dangerous tunnels of decommissioned mines, scouring for gold to sell to the chefs.
Previous articleState seeks to remand Sikhala for 6 months
Next articleUK-based Zimbo loses US$53K in bogus house deal